UXPin dia mirindra tsy misy farany amin'i Sketch noho ny fanavaozana | Famoronana an-tserasera
Sketch dia programa iray sarobidy ho an'ny mpamorona tranonkala, satria mamela antsika hamorona drafitra izay ho endriny amin'ny farany izy io mba hahafahantsika mampiseho izany amin'ny mpanjifa alohan'ny andehananay miasa.
UXPin dia nanambara a fampidirana Sketch vaovao sy nohatsaraina Miaraka izay handefasana ny fizotran'ny fampidirana rakitra Sketch ary hanovana azy ireo amin'ny farany.
Raha miresaka momba ny fampiasana UXPin isika dia satria Sketch, mandritra ny famolavolana dia manome ny zava-drehetra, ao amin'ny prototyping ny fahaizany voafetra kokoa. Ka amin'ny farany dia manondrana ny volanao amin'ny fitaovana hafa ianao hamita ny fizotrany.
Io no idirany fanatsarana ny UXPin amin'izay rehetra mikoriana dia tanterahina ary mamonjy antsika fotoana sy tanjaka amin'ny fizotran-javatra izay natambatra ankehitriny. Andao lazaina fa omen'ny UXPin anao izay rehetra ilainao amin'ny famolavolana prototypes izay miasa toy ny tena vokatra.
Miresaka ny fidiran'ny lahatsoratra tena izy amin'ny famolavolana, singa mifandraika ary misy fepetra mihitsy aza. Raha hiara-miasa amin'ny Sketch dia afaka mamorona tetikasa vaovao ao amin'ny UXPin izahay, manafatra an'i Sketch izahay ary amin'izany dia handeha mivantana amin'ny ampahany manan-danja indrindra amin'ity fitaovana ity izahay.
Inona no zava-bita tamin'ity ny fanavaozana ny UXPin dia fomba mora kokoa hitondra ireo endrika nomerika ireo amin'ny endrika tena izy mba hanampiana ny mpamorona tranonkala amin'ny asany. Azontsika atao ny mampiasa fitaovana roa tsara indrindra ho an'ireo mpamorona tranonkala mba hanatsarana ny asantsika sy hitehirizana ny ezaka.
UXPin dia manana fitsarana 14 andro Manoro hevitra anao izahay fa manandrana mahafantatra fitaovana tsara hanampiana anay amin'ny fivoaran'ny asanay ary hifantoka bebe kokoa amin'ny famolavolana. Aza adino ny vaovao rehetra momba ny fanavaozana Sketch farany tamin'ny andiany 4.1 ary nitondra anao izahay avy amin'ity lahatsoratra ity manodidina ireo faritra ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » UXPin dia mamoaka fampidirana Sketch vaovao sy nohatsaraina